Publiée par iabany — Le 31 décembre 2016
Vaovao mikasika ilay rotaka any Namorona: nisy mpangalatra jirofo voasambotry ny fokonolona, ary natolotra ny biraon'ny zandary. Tafaran'izay anefa dia gaga ny fiarahamonina nahita fa tafavoaka ilay mpangalatra rehefa avy nanao risoriso tamin'ny zandary. Tezitra ny fokonolona ka nitady ny lehiben'ny zandary ary namono nahafaty azy. Namaly faty ny zandary sady niantso renfort mihitsy. Amin'izao fotoana izao dia raikitra ny haza lambo ataon'ny zandary ary tsy mifidy izany fa ny lehilahy rehetra na lehibe na kely. Voatery mandositra any anaty ala ny olona amin'izao, nefa vokatry ny kolikoly avy amin'izy ireo no nanombohany. Namorona dia amin'iny faritra Vatovavy Fitovinany iny.
Ao amin'ny renivohy try toamasina ao dia mijaly ny mpitatitra na ...